5 n'ígwé mejupụtara filtration
Obere iguzogide, nkasi obi na iku ume
PFE95 nzacha nzacha
Ebumpụta ụwa ma nwalee.
Ihe okike ya na-echekwa
Akpụkpọ anụ siri ike nke nwa gị dị ọcha ma dịkwa nro.
Mmanya na-aba n'anya: Na-edobe mmiri nke anụ ahụ nwata ahụ.
Ezigbo: Maka nhicha nwa kwa ụbọchị.
Jiri Ha: Na ngbanwe ọ bụla nke metụ akwa, ime ụlọ ịwụ na ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya.
3 n'ígwé Myọcha Disposable echebe nkpuchi
3 n'ígwé mejupụtara filtration
30 na-ehichapụ ezigbo njikwa mmanụ na-ehichapụ maka ntutu na ntutu
Ihe nhicha ntutu na ntutu na-ekpochapu ntutu bụ ihe mkpofu enweghị ọgwụ na-ewepụ iji mee ka ntutu dị ọcha na nsị na mmanụ na-enye vitamin dị mkpa maka ntutu dị mma. Ihe nhichapụ ndị a nwere antifungal na antibacterial Efrata ma na-enye aka n’akpịrị na-adịghị mma. Ezigbo maka iji na isi na ntutu isi na-eyi ụdị nchekwa dịka braids na ịkwanye ma ọ bụ iji zere ịsa oke.
Mee ngwa ngwa hichapụ kichin kichin
Ihicha ihe nhicha nke kichin bụ ụzọ kachasị mfe ma dị mma iji kpochaa. Ọ nwere ike decontamination ike na ike n'ụzọ dị irè ọcha mmanu mmanu fume na unyi. Ihe nhicha ahụ siri ike na-ehichapụ ma gbuo 99% nke nje. Ngwa ngwa na mfe aka ihicha. Enweghi kemịkal siri ike.
The Hand Sanitizer dị irè na iwepu ihe karịrị 99.99% nke ọtụtụ nje na-emerụ ahụ na nje. Ngwa ngwa na mfe aka ihicha. Enweghi kemịkal siri ike. Iji belata nje bacteria na aka na anụ nke nwere ike ibute ọrịa. Akwadoro maka iji ugboro ugboro.
Ihu ihu na-ehichapụ anụ ahụ mgbe ị na-ewepụ ihu na anya anya. Ndị a na-etinye akwa nhicha dị ọcha na acai wepụ iji mee ka anụ gị dị ọcha ma zụọ gị, na-eme ka ị nwee mmetụta dị nro ma na-enwu gbaa.
Pet Grooming Nhicha Pet Wipes Paw Sanitizing Wipes
Nkịta gị na-abanye na mamịrị na ụdị “ihe” niile jọgburu onwe ha n'oge ha na-aga ije, wee gbaa ụlọ gị ọsọ, wụkwasị n'elu akwa gị ma tụgharịa na ohiri isi gị. Enough kwuru.
75% Alcohol Instant Antibacterial jel Hand Sanitizer
Ntabi Ọhụrụ n Ọcha antibacterial hichapụ bụ ụzọ kachasị mfe ma dị mma iji kpochapụ. Ihe nhicha ahụ siri ike na-ehichapụ ma gbuo 99% nke nje. Ngwa ngwa na mfe aka ihicha. Enweghi kemịkal siri ike.
Saa Car Dashboard Carelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchekwa Na Na Na Na Na Na
Antibacterial nke na-eme ka mmiri dị n'ime ụlọ, Rubber & Plastic.
Cargbọala na ọkwọ ụgbọ ala na-echekwa nhichapụ ndanda na-enyere aka weghachite agba agba na ụgbọ ala gị. Ha na-echebe ime ụlọ ụgbọ ala gị ka ọ ghara ịda mba, na-akụda ma na-achagharị n'ihi UV, ozone, oxidation na ikpughe oke okpomọkụ.